प्रतिवन्धबारे संवैधानिक ज्ञाता श्रेष्ठ र केसी भन्छन्, ‘विप्लव विरूद्धको प्रतिवन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर विरुद्धमा समेत छ’-Nepali online news portal
प्रतिवन्धबारे संवैधानिक ज्ञाता श्रेष्ठ र केसी भन्छन्, ‘विप्लव विरूद्धको प्रतिवन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर विरुद्धमा समेत छ’
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का चेला नेत्र विक्रम चन्द ‘बिप्लव’को नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सरकारले प्रतिबन्धबारे कानुनविदहरूले विराेध गरेका छन् ।
नेपाल बार एशोशिएशनका अध्यक्ष शेर बहादुर केसीले प्रतिवन्धबारे भनेका छन्, ‘जुन संगठन कतै कुनै आधिकारिक निकायमा दर्ता नै छैन भने के को प्रतिबन्ध ? आपराधिक गतिविधि गरेमा हुने कार्वाही भनेको फौजदारी संहिता अनुसार हो। त्यो जो कोहीलाई पनि लागु भइहाल्छ ।’
‘जुन दल चुनावमै भाग लिन्न भनेर हिँडेको छ भने त्यसमा के को प्रतिबन्ध केको कार्वाही’ उनले उल्टै प्रश्न गरे । अर्को कुरा नेपालको संबिधानले नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । शान्तिपूवर्क भेला हुन अधिकार दिएको छ । राजनीतिक दल खोल्ने र संगठन विस्तारको अधिकार दिएको छ । वर्तमान संबिधान नै नमाने पनि बिप्वलाई मात्रै त्यो अधिकार प्रयोगमा रोक लगाउन पाइन्छ ? त्यो संबिधानकै खिलापमा हुन्छ, केसीले तर्क गरे ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध भनेको यूएन चार्टरको समेत बिरुद्धमा छ । नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो। उसले थुप्रै सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । यूएन चार्टरले जनतालाई विद्र्रोह गर्ने अधिकार समेत दिएको अबस्थामा नेपालले त्यसलाई निषेध गर्न पाउँदैन, सरकराले यसको खिल्ली उडयो, यो सरासर गलत कदम हो’, श्रेष्ठले तर्क गरे ।
‘माओबादी युद्धमा १७ हजार नागरिक मारिँदा पनि गरिजा प्रसाद कोइरालाले उनीहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आतंककारी घोषित माओबादीसँग वार्ता गरेका थिए । के ओली सरकारले बिप्लव समूहलाई सिध्याउन सक्छ ? पाउँछ ? त्यो असंभव छ । विकल्प भनेको वार्ता नै हो, अर्को विकल्प छैन’ उनले भने ।